यूएईमा अलपत्र १ सय २० जनालाई घर फर्काइयो – Khabar Silo
यूएईमा अलपत्र १ सय २० जनालाई घर फर्काइयो
Posted on September 21, 2019 Author admin Comment(0)
काठमाडौं। रोजगारदाता कम्पनीका कारण युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई को आबुधाबीमा अलपत्र १ सय २० जना नेपाली कामदारलाई घर फर्काइएको छ । नेपाली दूतावास, त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनी र स्थानीय अदालतको पहलमा कामदारलाई घर फर्काइएको हो । आबुधाबीमा रहेको एड्भान्स फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस एलएलसीमा कार्यरत २ सय ५० जना नेपाली कामदार समस्यामा थिए । समस्यामा परेका ती कामदारमध्ये १ सय २० लाई स्वदेश फर्काइएको हो ।
बाँकी कामदार फिर्ता पठाउन प्रक्रिया थालिएको र छिट्टै नेपाल पठाइने दूतावासले जनाएको छ । नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी मोतीराम भुसालले पहिलो चरणमा पुरुष कामदारलाई घर फर्काइएको छ र दोस्रो चरणअन्तर्गत महिला कामदारलाई फर्काउने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए । करार अवधि पूरा भएपछि कम्पनीले भिसा नवीकरण नगरेको र ६ महिनादेखिको तलबसमेत नदिएपछि कामदार समस्यामा परेका हुन् । सो कम्पनीमा नेपालीसहित अन्य देशका गरी ६ सयभन्दा धेरै कामदार समस्यामा छन् । गत आइतबारदेखि नेपाली कामदारलाई घर फर्काउन थालिएको हो ।
समस्यामा परेपछि कामदारहरूले तीन महिनाअघि दूतावासलाई जानकारी गराएका थिए। ६९ जनाले लिखित निवेदन दिएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सुरुवातमा दूतावासले समस्याबारे चासो नदिएपछि पीडित थप समस्यामा परे । आबुधाबीमा अलपत्र परेका कामदारको विषयमा पीडितको दबाबपछि दूतावासले यो विषयलाई चासो दिएको थियो । दूतावासमा ६९ जनाको निवेदन परेको भए पनि अन्य क्षेत्रमा रहेका पीडितहरू सम्पर्कमा आउन थालेका थिए ।
अहिलेसम्म २ सय ५० भन्दा बढी पीडित कामदार सम्पर्कमा आएको दूतावासले जनाएको छ । नेपाली कामदारको समस्या समाधानका लागि दूतावासले श्रम काउन्सुलर भेषबहादुर कार्की, श्रम सहचारी मोतीराम भुसाल र जनसम्पर्क अधिकृत इरफान आलमलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
डीभीको लागि पासपोर्ट बनाउनेको घुईंचो, राहदानी विभागमा दैनिक २८ सय आवेदन
काठमाण्डौ – धनुषाका मुकेशकुमार ठाकुर पासपोर्ट बनाउनको लागि काठमाण्डौ आएको दुई दिन भयो । जिल्लामा पासपोर्ट बनाउन ढिलो हुने भएपछि उहाँ छिटोको लागि काठमाण्डौ आइपुग्नुभएको हो । तर काठमाण्डौमा उहाँजस्तै पासपोर्ट बनाउन आउनेहरु धेरै भएपछि आवेदन बुझाउनको लागि पालो पाउनै मुश्किल परेको छ । उहाँ राहदानी विभाग अघिल्तिरको लामो लाइनमा कतिबेला घडी हेर्दै त, कतिबेला […]
जब विमान ढिलो भएपछि राजपा सांसदको ‘पारो तात्यो’
काठमाडौं। प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरमा रहेको विमानस्थल एक व्यस्थ विमानस्थल मध्ये एक हो। दशैंपछिको चहलपहलले गर्दा हालका दिनमा सबै विमानस्थलहरुमा चहलपहल बढि नै छ। सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा पनि यात्रुको चाप निकै थियो। बुद्ध एयरको विमान सोमबार बिहान ११ बजेर ४० मिनेटमा जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि उडान भर्ने उडान तालिका थियो। ११ : ४० को […]
नयाँ युवतीसंग देखिएपछि पत्रकारहरुले सलमानलाइ प्रश्नै प्रश्न गरेपछि दिए मुखभरिको जवाफ ! आखिर को हुन् यी युवती ? (भिडियो)